Ingoma Yomkhomo ~ I-Oceanfront Escape
Falmouth , Tasmania, i-Australia
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Ingrid And Clifton
Iculo lomkhomo liwukuphunyuka onqenqemeni lolwandle lapho ama-pacific gull ekhala khona futhi kuhlokoma ulwandle kugcwala umoya.
Umjondolo wethu osogwini uyindawo engcwele yokuthula nokuzola, elungele ngokuphelele izivakashi ezi-2 - 4.
Itholakala endaweni ethokomele yase-Falmouth, indawo emangalisayo, eseceleni yoGu olusempumalanga yeTasmania.
**NJENGOBA IFIKIWE ESITAYELENI SEZWE, I-BROADSHEET, IKHAYA LAMI LASE-SCANDINAVIAN**
Umjondolo owakhiwa ngeminyaka yawo-1980 ngumdobi wendawo iWhale Song ujabule futhi wathandwa kakhulu eminyakeni edlule; ngothando nenhlonipho efanayo yale ndawo ekhethekile silungise umjondolo ukuze sithuthukise ukunethezeka kwakho futhi senze ukuhlala kwakho kube yinto ongenakulibaleka.
Igumbi lokulala eliwuchwepheshe elinokubukwa kolwandle lisho ukuthi kusukela lapho uvuka, ukhangwa yisimo esishintshashintshayo soLwandle lwaseTasman.
Ngena kalula kumbhede wakho wendlovukazi opholile, othokomele futhi ujabulele ukubukwa okudakayo olwandle njengoba izama ukukuyenga ukuba ususe emaphusheni akho anyakazisa ubuthongo bakho kuze kube kushaya ucingo ekuseni. Vumela ukuphuma kwelanga kukuvuse kancane futhi inyanga ikhanye ilinge ukuthi uhlole ukuthula, ukuqhekeza komlilo, ukubiza kolwandle; futhi mhlawumbe uma iwashi lakho lenhlanhla i-whales iphula ukukhanya kwenyanga; thatha isikhathi sakho.
Izindlela zamatshe ezigebengayo, zikuholela kumadekhi angasese abanzi, thola indawo yomlilo enefasitela olwandle olungapheli; umbono omangalisayo.
Buka imikhomo ifuduka, amahlengethwa nama-Orcas edlula, izikebhe zidlula, ama-gannet etshuza ukuze athole izinhlanzi njengoba izikebhe zokudoba zidonsa, ama-Pacific gull antweza, ahlala phezu kwamadwala futhi abize… umsindo omnandi kakhulu.
Njengoba kuhwalala, jabulela ingilazi yewayini emlilweni, njengoba ilanga lishona entshonalanga lisakaza ukukhanya kwalo okumangalisayo esibhakabhakeni esisempumalanga.
Uma ube nenhlanhla yokuba semjondolo inyanga egcwele ungajabulela lo mbono omangalisayo njengoba inyanga iphuma phambi komjondolo phezu kolwandle.
Jabulela umkhiqizo wasendaweni oqoqwe ohambweni lwakho kanye nenzuzo entsha evela olwandle, njengoba upheka, ucula, uhleka ekhishini lesitezi esiphezulu, udlala irekhodi eliyintandokazi ukuze usethe isimo sakho sengqondo futhi ubukele ilanga lidansa olwandle. Ikhishi lethu elilungiswe kahle linakho konke okudingayo ukuze usize wenze amadlelo amahle kanye namadili amnandi akhuthazwa inhliziyo yakho.
Hlola futhi uthole elinye iwayini elimnandi lendawo kanye nemikhiqizo emisha, ukudla kwasolwandle okubanjwe endaweni, inyama yenkomo esezingeni eliphezulu kakhulu, ushizi we-artisan, i-Gin neWhisky egayiwe endaweni.
Vala, misa kancane isikhathi futhi ubalekele emaphethelweni omhlaba lapho ugqolozela khona izinkanyezi, ubukele ulwandle lucwebezela ngaphansi kokukhanya kwenyanga kuyilapho lucwiliswa kubhavu oshisayo wangaphandle. Noma ujabulele ukuzindla ngohambo lwakho lolwandle, ukubuka ama-gull etshuza olwandle esuka eshaweni eshisayo yangaphandle; vumela izinwele zakho ezinosawoti, izinyawo eziyisihlabathi kanye nemivimbo yelanga iqabule emvuleni efudumele.
Isihlabathi & Usawoti
Uma uluthanda ulwandle, kunokubhukuda okuvikelwe uhambo olufushane lwezansi ngemizila noma ukuzungeza inhloko-dolobha e-Henderson lagoon kanye nolwandle olubanzi lwe-surf, nokuntweza okusezimeni ezifanele kulabo abantweza emanzini. Njalo qaphela ukubhukuda njengoba izimo zingashintsha ngezikhathi ezithile.
Ukudlala i-snorkeling usuka ogwini uphume ngaphambili kwe-Whale Song ngeke kudumaze labo abanolwazi.
Uvumela igagasi liphawule indlela yakho yosuku, zulazula phansi esihlahleni setiye endleleni egutshuzelwe emaphethelweni aseningizimu yengadi, ukuya olwandle, amagobolondo enza ingubo yokulala ewugqinsi esihlabathini ephumula ngemva kohambo lwawo olude. Amatshe omile omisiwe namatshe egwadle azwakalayo angena ephuma elangeni elimhlophe; ukudala imihlaba elahlekile njengoba uzindla uhlanganisa amagobolondo angapheli athakazelisayo. Isikhathi ngesakho ukuthi udwebe, uphuphe, ucabange, ujabulele futhi ujabulele ukufudumala kwetiye lakho lokuqala noma ikhofi eliwubukhazikhazi futhi ubuke ulwandle lucwebezela ngaphansi kwelanga njengoba luqhubeka unomphela.
Uma uzizwa uthanda ukuhlola le ndawo i-Whale Song iyisisekelo esikahle sokufinyelela ezindaweni ezikhangayo zasendaweni okuhlanganisa i-Bay of Fires, iFreycinet National Park, i-Bicheno, i-St Helens kanye namabhishi amaningi amangalisayo ogwini olusempumalanga kanye nokuqwala izintaba kulesi sifunda esihlanzekile okufanele sikunikeze.
Ngesikhathi sokufuduka kwemikhomo hlala ubhekile imikhomo yama-humpback, amahlengethwa nama-orcas njengoba ebhukuda edlula emjondolo unyaka wonke; sebenzisa izibonakude zethu ukusiza ukubona umsebenzi.
Ingoma yomkhomo iyindawo yokubuyisela, ujabulele ukuthula, iphupho, ukuthola ugqozi, uhambo nenjabulo.
uthando, iphupho, exhale
I-Falmouth iyindawo ekhetheke kakhulu, ecashile. Iningi lemijondolo nezakhiwo zidlala indima eyingqayizivele emlandweni ocebile womphakathi we-Falmouth obumbene nowokudala.
Zulazula emigwaqweni ethulile noma ufinyelele indlela yasentshonalanga ekugcineni kwengadi, hlola njengoba usendleleni eya emgodini wokubhukuda othandwayo wase-Henderson Lagoon. Uma usuFalmouth ngeke udinge imoto yakho ukuze uhlole idolobha lethu elimnandi, izinyawo zakho zizothola indlela yazo.
Ehlobo, kuhlale kunendawo yangasese ongajabulela kuyo ulwandle ukusuka, izinqaba zezinkuni ze-drift ukuze uhlole futhi udwebe. Abatshuzi bafike bahambe njengoba ukukhukhumala kuyivula. Ebusika, kukhona ukuthula okuhle, okunebhonasi emnandi yelanga eliphanayo elikhanyayo ukwenza izinsuku zizwe zifudumele. Yonke inkathi yinhle, futhi bayalingana ngomlingo wabo, sibathanda bonke!
Igrosa kanye Nezimpahla
Azikho izitolo e-Falmouth ngakho-ke sicela uqoqe konke ukudla kwakho ngaphambi kokuthi ufike. Kukhona i-IGA e-St Mary's, Scamander nase-St Helens noma e-Bicheno; kuye ngomzila owuhambile kungenzeka ukuthi usunayo i-hamper. Kukhona ne-East Coast Providore e-St Helens enikezela ngenyama yasendaweni ehamba phambili, izinhlanzi zasolwandle kanye nemikhiqizo yasendaweni.
Iculo lomkhomo linikeza izinto eziyisisekelo zokudla, Amafutha, Usawoti, Upelepele, uhla lwetiye elimnandi nekhofi.
1: emnyango wakho kunoLwandle lwaseTasman, thatha indlela ecashile ekugcineni engadini yehle uze ufike 'ebhishi' laseShelly endaweni yolwandle ngaphambili... ungabe usuhamba umzila ohamba phambili uzungezela ku-surf ye-Falmouth. ibhishi kanye ne-Henderson Lagoon ... njengoba uhamba endaweni eyinhloko kunembobo evunguzayo esebenza ekukhukhumeni okuhloniphekile, cishe uhhafu wendlela lapho uhamba enyakatho...phakathi kwefomu le-granite headland.
Uzothola izinqaba ezinhle kakhulu zokhuni olukhukhulekayo oluzungezwe izindunduma zesihlabathi ohlangothini olusenyakatho yechweba .. ungase udinge ukugwedla / ukuwela uwele kuye ngokuthi igagasi.
2: uhambo oluya oGwini Olusempumalanga aluphelele ngokuhlola kwethu i-Bay of Fires... Ulwandle lwethu oluncane esilukhonzile i-Sloop Reef... kukhona futhi uhambo oluhle olunqamula i-Shea Oaks ukuya emaphethelweni enhlokodolobha enamadwala enobuhle obuhle. buka ngase-sloop reef.
Kukhona iBinalong Bay eyisakhiwo sodumo vele kodwa sijwayele ukujabulela amabhishi aseduze ne-Gardens Road ngaphambi kokuthi ungene edolobheni. (Cosy Corner & Jeanneret Beach)
3. I-Peron Dunes.... ingxenye ye-St Helens National Park cishe imizuzu engu-30 enyakatho ye-Falmouth ngaphambi nje kokuba ungene elokishini lase-St Helens... landela u-St. Helens Point Road uphumele e-Akaroa
uhlelo lwangempela lwe-Dune luhle kakhulu... indawo yenyanga lapho nezingane sishelela phansi emabhodini amadala ama-boogie noma amakhadibhodi...kodwa kuyamangalisa ukuhambahamba futhi sibuke.
amabhishi ongawajabulela lapha i-Maurouard Beach (i-Peron Dunes beach) kanye ne-Beerbarrel Beach .. kuwuphawu olungacacile oluthunyelwe kodwa vele ulandele amathrekhi futhi uzowathola ...
4. Angikaze ngihambe kulolu hambo kodwa ngemuva kwe-St Helens ngasePyengana kunehlathi elihle le-fern eliya e-Hall Falls ... elinechibi elihle ekugcineni lokubhukuda ... nakanjani ohlwini lwami engizolwenza uma singaphinde sehle!
Futhi endaweni efanayo kune-St Colomba Falls.
5. I-Blue Tier nayo iphezulu ngemuva kwe-St Helens... indawo yehlathi lemvula engakholeki kakhulu.. edume nangezindlela zamabhayisikili asezintabeni... kodwa ukuhamba lapha kuyamangalisa!!!
6. I-Sauna Entantayo / i-Derby- okuhlangenwe nakho okuyingqayizivele ngempela okumelwe uphuthelwe uma uhlela ukuhlola i-Derby ... qiniseka ukuthi ubhukha ulwazi lwakho ngaphambi kokuthi uhambe.. https://floatingsauna.com.au/
7. I-Douglas Apsley National Park icishe ibe yimizuzu engama-30 eningizimu yeNgoma yomkhomo...
kukhona ukuhamba okuhle ongakuhlola lapha
I-‘Douglas-Apsley National Park ihluke ngendlela emangalisayo, inezihosha zemifula nezimpophoma, ihlathi likagamthilini kanye nezindawo ezishisayo ezinganakiwe ithafa elinezingqimba ze-dolerite. Leli paki futhi lisekela izinhlobo eziningi zezilwane ezingavamile nezisengozini ezikhona lapha kuphela.
Uhambo epaki lusukela ekuhambeni okufushane, okulula ukuya ekuhambeni okufunayo ebusuku.
I-Apsley Waterhole, uhambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka endaweni yokupaka izimoto ku-Rosedale Road ngasemaphethelweni aseningizimu yepaki iyindawo ekahle yepikiniki, ihlathi elibukekayo kanye nokucwilisa ngokukhululeka ngosuku olushisayo lwasehlobo.
Ukuhambahamba okufushane okuvela emgodini wamanzi kuthatha ukubukwa kwamanzi kanye ne-Apsley Gorge ekhangayo, namachibi ayo anokuthula nezigcawu zomfula ezingaphazanyiswa. Ukuhamba ngezinyawo okude kuholela emathafeni ezimbali zasendle, emihosheni emanzi nasezihosheni ezijulile kuya ezimpophomeni ezinhle.’
8. Uma ulibangise eningizimu ungafuna ukwenza okuthile kwezokuvakasha?? Bona noma udlise usathane. I-East Coast Nature World ikufanele ukuvakashelwa...
9. I-St Patrick’s ikhanda likhuphuka...
Ikhanda likaSt Patrick liyisiqongo ngemuva kwe-Falmouth... kungenye indlela engingahambanga ngayo kodwa ungafinyelela kuyo ngokukhuphukela e-St Mary's e-Fingal Valley (imizuzu eyi-10 ukhuphuka udlula ngemuva kwe-Falmouth) ...
10. I-Freycinet NP! Kulungile lokhu akudingi singeniso kanye nendawo esivame ukuyivakashela uma sihlala e-Whale Song ... kodwa cishe ihora elingu-1 eningizimu ye-Falmouth...
I-Cape Tourville track imfishane futhi ilula futhi inokubukwa okuhle... kodwa-ke i-Wine glass bay walk iyadingeka ... ukuhamba kwezingozi muhle futhi kodwa kubheke e-Coles Bay.
11. Ikhofi elihamba phambili kuphela amaminithi angu-10 enyakatho ye-Falmouth lise-Swims in Scamander .... futhi benza ama-toasties angcono kakhulu 👌🏼
12. Kukhona futhi i-Mount William NP okungamahora angu-1 1/2 enyakatho ye-Falmouth.
13. Imizila yebhayisikili yase-St Helens kanye ne-Derby Mountain Bike
Imizila yebhayisikili yezintaba esezingeni lomhlaba ehamba emahlathini asendulo, izindawo ezishisayo kanye netheku lemililo .... uma udinga ukuqasha ibhayisikili noma ama-shuttles ukhuphuka futhi wehla entabeni bheka izixhumanisi ezingezansi.
Kunezinketho eziningi zokuqasha amabhayisikili asezintabeni e-St Helens:
Ngiyatholakala ukuthi ngithinte uma udinga usizo nganoma yisiphi isikhathi ngocingo noma ngomlayezo wombhalo. Sinomphathi otholakala endaweni uma udinga noma yiluphi usizo ngesikhathi uhlala engingakuhlelela.
UKUKHANSELA Okuhlobene ne-COVID
Sicela uqaphele ukuthi nakuba inqubomgomo yethu yokukhansela ‘iqinile’ sinikeza imbuyiselo EPHELELE kunoma iziphi izihambeli okudingeka zikhansele ngenxa yokuvalwa kwezindawo okuhlobene ne-COVID.
Siyabonga ukuthi lezi izikhathi ezingaqinisekile futhi sifuna ukuthi ubhukhe ukubalekela kwiNgoma yomkhomo ngokuthula kwengqondo.
Ngiyatholakala ukuthi ngithinte uma udinga usizo nganoma yisiphi isikhathi ngocingo noma ngomlayezo wombhalo. Sinomphathi otholakala endaweni uma udinga noma yiluphi usizo ngesikha…
Inombolo yepholisi: 154-2019